माइक्रोसफ्ट आउटलुक २०० 2007 को साथ एक कदम पछिल्तिर लिदै Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 11, 2007 बिहीवार, जनवरी 18, 2007 Douglas Karr
मा मानिसहरू लाई धन्यवाद sitepoint यो टाउको माथि लागि।
यो यस्तो निर्णय हो कि वास्तव मा तपाइँ माईक्रोसफ्ट बारे मा छक्क बनाउन। संग आउटलुक 2007माइक्रोसफ्ट अब ब्राउजर को उपयोग गरेर एक ईमेल रेन्डरिंग प्रस्ताव गर्न गइरहेको छ। बरु ती शब्द प्रयोग गर्न जाँदैछन्।
यसले आउटलुकमा निम्न सीमितताहरूको परिणाम दिन्छ:
पृष्ठभूमि छविहरूको लागि समर्थन छैन (HTML वा CSS)
फारमहरूको लागि समर्थन छैन
फ्ल्यास, वा अन्य प्लगइनहरूको लागि समर्थन छैन
CSS फ्लोट्स को लागी कुनै समर्थन छैन
अर्डरर्ड सूचीमा छविहरूको साथ बुलेटहरू बदल्नको लागि समर्थन छैन
CSS स्थिति को लागी कुनै समर्थन छैन
एनिमेटेड GIF को लागी कुनै समर्थन छैन
अनुमति-आधारित ईमेल मार्केटिंग अन्ततः मुख्यधारको साथ स्वीकृति र गति प्राप्त गर्दैछ। पाठकहरूसँग अन्तर्क्रिया घटना 'ट्रिगर' र थप डाटा अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट अर्को 'ठूलो कुरा' को रूपमा क्षितिजमा छ।
एक अनुमति-आधारित ईमेल सेवा प्रदायकको लागि काम गर्दै, म ईमेल ग्राहकहरूको नयाँ आविष्कारको लागि हेर्दै थिए - सम्भावनाहरू जस्तै ईमेलमा फ्ल्यास, ईमेलमा भिडियो, ईमेलमा च्याट, समृद्ध ईमेल अनुप्रयोगहरू जुन मानिसहरूलाई आफ्ना बैंकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिन्छ, आफ्नो काम, तिनीहरूका साथीहरू, र तिनीहरूका अनुप्रयोगहरू सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा।
यस्तो देखिन्छ कि माइक्रोसफ्ट त्यो परिवर्तन गर्न गइरहेको छ। माइक्रोसफ्टले ईमेल मार्केटमा प्रभुत्व जमाउँछ ... त्यसैले उनीहरूसँग आफ्नो उत्पादनको साथ नवीन भएर ग्राहक अनुभवलाई समृद्ध गर्ने अवसर छ। बजार नेता को रूपमा, यो तिनीहरूको जिम्मेवारी हो। बरु, तिनीहरूले सजिलो सडक लिएको छ र चुनौती असफल भएको देखिन्छ।
यी निर्णयहरूका प्रकारहरू हुन् जुन अन्य ईमेल ग्राहक विकासकर्ताहरू मुक्त गर्न अनिवार्य छन्। यदि तपाईंले नाम सुन्नु भएको छैन भने थन्डरबर्ड... तपाईं बिल्कुल यस बर्ष हुनेछ!
त्यहाँ आईटीमा छन् जुन यो लाग्छ कि यो एक आशीर्वाद हो, तिनीहरू सायद बिरामी छन् र ईमेलको साथ सम्बन्धित सुरक्षा मुद्दाहरूको बारेमा चिन्ताले थकित छन्। जे होस्, तिनीहरूको जीवन अलि जटिल भयो। यस प्रकारको निर्णयले मात्र प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य अनुप्रयोगहरू डाउनलोड र स्थापना गर्दछ हुनेछ उनीहरूले खोजिरहेका अमीर कुराकानीलाई समर्थन गर्नुहोस्। अब आईटीले चिन्ता गर्नुपर्दछ कि अर्को के हो र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने।
एउटा उदाहरण: मलाई याद छ जब आईटीले एउटा विशाल कर्पोरेसनमा मान्छेले ईमेलमा ब्लक गरिएको अनुलग्नकहरूको लागि काम गर्दछ। नतिजाको रूपमा, कम्पनीमा सबै सजिलै बाहिर गए र एक हॉटमेल ठेगाना पाए। (अन्तिममा मैले सुनेको छु, यो अझै पनि उनीहरूसँगको मामला हो)।
C'mon Microsoft। तपाई यो भन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ! यो फ्लीप्यान्ट निर्णयको प्रकार हो जुन ईमेल सेवा प्रदायकहरू, एजेन्सीहरू, विपणकहरू… र सबै भन्दा बढि तपाईका प्रयोगकर्ताहरूसँग धेरै शोकको कारण हुनेछ।
जनवरी १, २०१ 11 १२::2007 अपराह्न
मलाई थाहा छ म यस नयाँ संस्करणको रूपमा आउटलुक प्रयोग गर्न छोडें र क्षण थन्डरबर्ड बीटा राउन्डमा ल्याउछ म यसलाई फेरि एक धेरै गम्भीर नजरबाट लिन चाहन्छु; विशेष गरी ट्यागिंग को थप दिए।
जनवरी 16, 2007 मा 10: 22 एएम
केवल व्यक्तिहरू जसले आउटलुक २०० 2007 को बारेमा ख्याल राख्छन् वर्ड प्रयोग गरेर यसको ईमेलहरू रेन्डर गर्न, र माथि उल्लिखित सुविधाहरूको नोक्सान डिजाइनर र विकासकर्ता हुन्। USERS होईन!
के प्रयोगकर्ताले भन्यो? म चाहन्छु कि मैले ती अधिक अर्थहीन मार्केटिंग ईमेलहरू बढी पाएँ!?।
के प्रयोगकर्ताले भन्यो? म केवल मेरो ईमेलहरूको लागि ठूलो पृष्ठभूमि चित्रमा जान सक्छु !?
के प्रयोगकर्ताले भन्यो? म मेरो ईमेलहरूको खुला गणनालाई ट्र्याच गर्न सक्दछु !?
जनवरी 16, 2007 मा 11: 14 एएम
म तपाईसंग सम्मानपूर्वक असहमत छु र जान्छु, डाटाको बर्षको आधारमा, तपाईं अल्पमतमा हुनुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले स्पामको आनन्द लिन सक्दैनन्, तर उनीहरूले खोजीरहेको सामग्रीको साथ सौंदर्यपूर्वक मनपर्दो ईमेलहरूको आनन्द लिन्छन्। ग्राहकहरू जुन मसँग काम गर्छु मैले पाठमा आधारित ईमेलहरूबाट कुनै पनि रूपान्तरण प्राप्त गर्दिन। एचटीएमएल ईमेल खोल्नुहोस्, क्लिक गरियो र एक्सपोनेन्शल दरले रूपान्तरण गर्नुभयो।
व्यर्थ ईमेल कहिल्यै पनि पठाउन हुँदैन। जबकि, सहि सामग्रीको साथ सहि ईमेल पठाउँदा सही समयमा ट्र्याकिcking खुल्छ, क्लिक-थ्रु र ईमेलमा रूपान्तरण आवश्यक पर्दछ तपाईंको स्वाद के हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि। हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई परिणाम प्राप्त गर्न लक्षित सामग्रीको साथ कम मात्रामा कम ईमेल पठाउन सल्लाह दिन्छौं ... र यसले कार्य गर्दछ। मामला मा, सर्वेक्षण ग्राहकहरु मा डाटा संचय र उनीहरु लाई के चाहान्छन् प्रदान गर्न को लागी शानदार छ।
अर्थहीन पाठ ईमेल प्राप्त गर्नुको सट्टा, के यो एक सर्वेक्षण प्राप्त गर्न राम्रो लाग्दैन कि यदि विषय तपाइँसँग सम्बन्धित छ कि भनेर सोध्यो? र त्यो उत्तरमा आधारित छ, कम्पनीले उचित प्रतिक्रिया गर्छ? आउटलुक २०० क्लाइन्टसँग त्यस्तो अनुभव हुँदैन जुन कम्युनिटि अफ चेन अपको केही नटी निर्णयको लागि हो।
यो तपाईंको मनपर्ने रेस्टुरेन्टमा हिंड्ने जस्तो छ किनकि तिनीहरूलाई तपाईंको नाम, तपाईंको मनपर्ने तालिका, र तपाईंलाई कसरी खाना मनपर्दछ भन्ने कुरा थाहा छ। उनीहरूले त्यसो गरेनन तपाईबाट ती सूचनाहरू सulating्कलन नगरी। यो वेब वा ईमेलको साथ फरक छैन!
जनवरी 16, 2007 मा 11: 38 एएम
ईमेलको हेराई र अनुभव बाहेक, तपाईं पाठमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ। तर म यो तथ्यलाई हटेको छैन कि प्रयोगकर्ताहरूले राम्रो ईमेलहरू मन पराउँछन्, मँ गर्दछु। के मैले प्राप्त गर्न खोजेको छु कि ईमेल कागजातहरू हुन्, र वेब पृष्ठहरू होइन। तपाईं WPF \_ E र आउन आउने अन्य घटकहरूको साथ तपाईंको ईमेलहरूमा उन्नत कन्टेक्ट थप्न सक्नुहुनेछ। यी सबै प्लेटफर्म स्वतन्त्र हुनेछन् र डिजाइनर html भन्दा धेरै grater दायरा लाई अनुमति दिनेछ, पूर्ण अन्तरक्रियात्मक dd वातावरण सहित।
आईई रेन्डरर हटाइएको मुख्य कारण यो हो कि त्यहाँ विन्डोज एपीआईमा ग्रेटर पहुँच छ। र यदि कुनै "सुरक्षा" बक्सहरू एक uer मध्यस्थता गर्छन् तिनीहरू जस्तै केहि "ठीक" गर्न को रूप मा छन्।
यसैले दुबै ग्राहक र एक्सचेन्ज स्तरमा धेरै असुरक्षित संलग्नकहरूको रोकिदै। तपाइँलाई त्यो वातावरणमा NET अनुप्रयोगहरू चलाउन को लागी अनुमति दिइनेछ। NET अनुप्रयोगहरू अनुचित स्रोतबाट NET अनुप्रयोगहरू एक सुरक्षित, प्रमाणित स्यान्डबक्समा चल्छ जुन सामग्रीको रिचनेजलाई अन्तर्क्रिया नगरीकन पहुँच प्रतिबन्धित छ।
ओपनएक्सएमएल ईमेल ढाँचामा सार्नु माइक्रोसफ्टका लागि मास्टर स्ट्रोक हो। यसको मतलव यो हो कि उनीहरूका उत्पादनहरू अन्य ओपनएक्सएमएल उत्पादहरू जस्तै स्टारअफिस र ओपनअफिससँग अन्तरक्रियात्मक छन्। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ती ग्राहकहरूबाट सार्न अनुमति दिनेछ, र अरूले आउटलुक एक्सप्रेसलाई आउटलुकमा प्रोप्राउरेटरी ईमेल ढाँचामा सार्न बाहेक।
जनवरी 16, 2007 मा 11: 40 एएम
नराम्रो अंग्रेजी को लागी माफी मागे! मेरो दिमागले मेरो औंलाहरू भन्दा छिटो काम गर्दछ!
जनवरी १, २०१ 16 १२::2007 अपराह्न
मैले मेरा एन्ट्रीहरू २ वा I पटक सम्पादन गर्नुपर्दछ मैले मेरा त्रुटिहरू फेला पारे पछि! चिन्ता छैन।
तपाईंको पोइन्ट्स उत्कृष्ट छन् ... तर मलाई लाग्दछ कि हामीले ईमेललाई केवल एक यातायात संयन्त्रको रूपमा चुनौती दिनु पर्छ। थप सोच्नुहोस् कत्ति राम्रो ईमेल अतिरिक्त कार्यक्षमता र एकीकरणको साथ हुन सक्छ!